Man Utd oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Wolverhampton oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford… +SAWIRRO – Gool FM
Man Utd oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Wolverhampton oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford… +SAWIRRO
Dajiye February 1, 2020
(Manchester) 01 Feb 2020. Manchester United ayaa barbardhac la dhaafi weysay kooxda Wolverhampton oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala baxeen 0-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 25-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood ayaa waxay ku soo galeen garoonka dardar xoogan, waxay sameeyeen fursado badan halis ah ee goolal loo filan karay.
Laakiin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay bar-bardhac 0-0 ah ay isku mari waayeen labada kooxood Manchester United iyo Wolverhampton Wanderers, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.
PSG oo lumineysa Toddobo xiddig oo ay ku jiraan Edinson Cavani & Thiago Silva
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guushii ay ka gaareen kulankii adkaa ee Madrid Derby?